Izindaba - Izindlela zokuqapha ukusetshenziswa kwamaphaneli odonga angaphandle
Lapho usingatha amaphaneli odonga angaphandle futhi ulayisha futhi uthula amaphaneli odonga angaphandle, isiqondiso sobude bamaphaneli kufanele sisetshenziswe njengohlangothi lokucindezeleka, futhi amaphaneli kufanele aphathwe ngokucophelela ukugwema ukushayisana nokonakala kwamapaneli;
Lapho uphatha ishidi elilodwa, ishidi kufanele lihanjiswe liqonde ukugwema ukusonteka kweshidi.
Ubuso obungezansi bezinto zokuhamba kufanele bube busicaba, futhi amaphaneli odonga angaphandle kufanele alungiswe ngemuva kokulayishwa okuvundlile ukugwema ukulimala komkhiqizo ngenxa yokubopha ngokweqile kwamapaneli odonga angaphandle ngesikhathi sokulungiswa;
Nciphisa ukudlidlizela ngesikhathi sokuhamba ukuvimbela ukushayisana nemvula.
Isimo sokubekwa kwamapaneli odonga angaphandle kufanele singeniswe umoya futhi somile, futhi indawo kufanele ibe yisicaba futhi iqine;
Uma usebenzisa amakhushini ezinkuni ayisikwele, qinisekisa ukuthi umkhiqizo awukhubazekile;
Lapho zibekwa emoyeni ovulekile, amaphaneli odonga angaphandle kufanele ambozwe ngokuphelele ngendwangu engangeni manzi;
Lapho kugcinwa amaphaneli odonga angaphandle, kufanele agcinwe kude nezindawo ezinamazinga okushisa aphezulu nomswakama ophakeme, futhi akufanele ahlanganiswe nezinto ezonakalisayo njengamafutha namakhemikhali.
Lapho uvula iphakheji ye-wallboard yangaphandle, kufanele uyibeke phansi kuqala, bese uyikhipha kusuka phezulu kwephakeji lomkhiqizo, bese ukhipha ibhodi kusuka phezulu kuye phansi;
Ungavuli ipaneli yodonga olungaphandle ukusuka ohlangothini ukugwema ukuklwebheka kuphaneli.
Ngemuva kokuthi iphaneli lodonga lwangaphandle lisikiwe, ukufakwa kwensimbi okusikayo kuzonamathiselwa ngaphezulu kanye nokusikwa kwephaneli, okulula ukugqwala. Ukufakwa kwensimbi okusele kufanele kususwe.
Ngesikhathi sokwakha, kufanele kunakwe ukuze kuvikelwe indawo yebhodi langaphandle lodonga ukugwema ukuklwebheka nemithelela.
Gwema umsebenzi wokwakha uma lina;
Ngesikhathi senqubo yokwakha, vimbela ingaphakathi lamapaneli odonga angaphandle ukuthi axhumane namanzi ukuvimbela amanzi angaphakathi ukuthi angangeni ebusweni, abangele ukugqwala nokugqwala ebusweni bephaneli, kunciphise impilo yenkonzo yayo.
Gwema ukuyisebenzisa ezindaweni ezinamazinga okushisa aphezulu, umswakama ophakeme, nezindawo zokukhipha i-asidi (njengamakamelo okubilisa, amakamelo okushisa umlilo, iziphethu ezishisayo, izigayo zamaphepha, njll.).
Okokuthungwa okuphuma odongeni, amapayipi asezingeni lokufaka umoya opholile namapayipi we-condensate, ubukhulu obufanayo kufanele bugcinwe ngaphambi kokufakwa kwepuleti. Ungavuli izimbobo ngemuva kokufakwa kwepuleti.
Uma kunamalungu asekelayo ama-air conditioners, okokukhipha umoya nezinye izinto ebusweni bodonga, kufanele kushiselwe ugesi nezinye izinqubo ngaphambi kokuba kubekwe izindonga zodonga nezinto zokwambathisa.